နွေရာသီမှာကြုံရတဲ့ ခြေဖနောင့်အက်ကွဲခြင်းကို သက်သာစေမယ့်နည်း
ဘယ်လောက်ပဲ ဝတ်စားထားပါစေ ဖနောင့်တွေကြောင့် ရှိုးပဲ့ရတယ်လေ။
ဆောင်းရာသီ ကုန်သွားတာတောင် ခြေဖနောင့်တွေ ခြောက်သွေ့အက်ကွဲနေတုန်းပဲလား? ဘာကြောင့်မို့လို့ ဒီလိုဖြစ်နေရတာလည်းဆိုရင် ဖိနပ်ကိုပဲ ပြောရပါလိမ့်မယ်။ ရာသီဥတုကပူတော့ ဖိနပ်ပါးတွေပဲ စီးဖြစ်တယ်လေ။ နေပူဒဏ်မိ၊ ဖုန်တွေနဲ့ကပ်ပြီး ဖနောင့်တွေက ခြောက်သွေ့လာရတော့တာပါပဲ။
ခြောက်သွေ့ပြီး အရေပြားတွေလန်နေတဲ့ ခြေဖနောင့်ဟာ လမ်းလျှောက်လေလေ ပိုဆိုးလေလေပါ။ ပြေးရင် ပိုတောင်ဆိုးသွားပါဦးမယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ ဝတ်စားထားပါစေ ဖနောင့်တွေကြောင့် ရှိုးပဲ့ရတယ်လေ။ နာကလည်း နာလိုက်သေး။ ဆိုးရွားလိုက်တဲ့အဖြစ် မဟုတ်လား။ ဒါကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ?
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဖိနပ်ပြောင်းစီးဖို့ အကြံပေးပါရစေ။ ဖနောင့်ကို အုပ်ထားပေးမယ့် ဖိနပ်ပါးလေးတွေ ရှိပါတယ်။ နေဒဏ်၊ လေပူဒဏ်၊ ဖုန်တွေနဲ့ မထိအောင် ထားသင့်ပါတယ်။ သားရေရှုးဖိနပ်တွေလိုမျိုး ခြေဖနောင့်ကို ပွတ်တိုက်မှုဖြစ်စေတဲ့ ဖိနပ်တွေ စီးတဲ့အခါ ချည်သားခြေအိတ်ပါးလေးတွေကိုလည်း ဝတ်ထားပါ။ ခြေဖဝါးလိမ်းတဲ့ခရင်မ်ကောင်းကောင်းလေးတွေ ပုံမှန်လူးပေးရုံနဲ့ ခြေဖနောင့် အက်တာ သက်သာပါတယ်။ Heel Balm လို့ ခေါ်တဲ့ ခြေဖဝါးလိမ်းအဆီတွေဟာ ခြောက်သွေ့အက်ကွဲမှုတွေကို ပျောက်စေပါတယ်။